Aad Ayaan Ugu Cadhaysnaa Oo Aan Uga Niyadjabsanaa Jurgen Klopp!-Xidig Halbawle U Ah Liverpool Oo Qirasho Layaableh Sameeyay. - Gool24.Net
Aad Ayaan Ugu Cadhaysnaa Oo Aan Uga Niyadjabsanaa Jurgen Klopp!-Xidig Halbawle U Ah Liverpool Oo Qirasho Layaableh Sameeyay.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ah tababare inta ugu badan hanta quluubta ciyaartoyda kooxdiisa laakiin taasi lama micno ah in dhamaan ciyaartoyda kooxda Reds ay markastaba go’aanadiisa ku faraxsan yihiin.
Georginio Wijnaldum oo ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda Liverpool isla markaana lagu tilmaamo geesiga aan loo heesin ee ay marar badan la’aantii Reds jabi lahayd ayaa soo bandhigay arin uu murugo iyo cadho wayn ka soo maray.
Xidiga reer Holland ee Georginio Wijnaldum ayaa waraysi uu bixiyay ku sheegay in kulankii uu wacdaraha dhigay ee Barcelona uu cadho wayn u hayay Jurgen Klopp isla markaana uu aad uga niyadjabay in aanu shaxda ku soo bilaabin.
Georginio Wijnaldum ayaa arinta Jurgen Klopp kala dhexaysa ku tilmaamay nacayb iyo jacayl isku jira wuxuuna yidhi: “Waxa aanu la leenahay tababaruhu badnaan iyo yaraanba waa nacayn iyo jacayl. Waxaan hubaa in Klopp uu xiisaha ugu fiican qalbiga ugu hayo ciyaartoy kasta oo kooxda ah”.
“Laakiin mararka qaar ka ciyaartoy ahaan, wwaxaad si aad u xoogan ugu lug lahaanaysaa ciyaarta kadibna wali tababaraha ayaa ku soo baacsanaya” ayuu Wijnaldum hadalkiisa raaciyay isaga oo muujinaya sida uu Klopp wax badan uga dalbado ciyaartoydiisa.
Kadib maxaa dhaca marka uu Klopp ciyaartoy si fiican u shaqeeyay uu wali wax badan ka sii dalbado? Wijnaldum oo ka jawaabaya ayaa yidhi: “Kadib mararka qaar waad ku kululaanaysaa, aniga arintayda isaga waan u cadhooday”.
Intaas kadib Gini Wijnaldum ayaa sheegay in aanu filayn in wixii uu sameeyay kulankii Barca ee uu labada gool dhaliyay ahayn wax uu Klopp sii qorsheeyay wuxuuna yidhi: “Anigu wali ma ogi haddii wixii kulankii Barcelona ka dhacay uu ahaa qorshihiisa dhabta ah”.
Gini Wijnaldum oo cadhadii uu u hayay Klopp ka hadlaya kulankii Barca ayaa yidhi: “Laakiin habeenkaas anigu aad iyo aad ayaan ugu cadhaysnaa, aad ayaan uga niyadjabay in aanan ku soo bilabaan. Dib u eeg, waxaan odhan karnaa wax walba si sax ah ayay u shaqeeyeen, marnaba ma ogaan karno sida ay wax u dhici lahaayeen haddii uu tababaruhu aniga igu soo bilaabi lahaa”